Ungayibukela njani iMovie kwi-Intanethi kwiLaptop yakho
Ukuba unonxibelelwano lwe-Intanethi, ungabukela iimovie kwiLaptop yakho yeWindows usebenzisa inkonzo ekwabelwana ngayo ngevidiyo ekwi-intanethi enjengeYouTube okanye naziphi na iisayithi zemidlalo bhanyabhanya ezikhululekileyo nezihlawulelwayo ezinjengeNetflix kunye neHulu.
Xa ubukela iimovie kwi-intanethi, usebenzisa iteknoloji ebizwa ngokuba ukusasaza. Umboniso bhanyabhanya awukhutshelwa kwiLaptop yakho; Endaweni yoko, iibits zevidiyo zisasazelwa kwikhompyuter yakho kunxibelelwano lwakho lwe-Intanethi. Xa udlala itreyila kwiVidiyo, uyasasaza nevidiyo.
Icala lokudibanisa ukusasazwa kwevidiyo kukuba unokubukela iividiyo - uninzi lwazo simahla - ngaphandle kokulayisha ngaphezulu kwimemori yelaptop yakho. Icala elingalunganga kukuba, kuxhomekeke kunxibelelwano lwakho lwe-Intanethi, ukusasaza kunokuba ngaphantsi kokudlalayo kunokuba udlale imovie kwiDVD. Ukuba ukhe wazama ukubukela ividiyo ekwi-intanethi kwaye wafumana umyalezo wokuba yeyiphi ividiyo ukubhaqa , uyazi ukuba kuthetha ntoni oku.
Zama Youtube kwaye Hulu njengesiqalo. Umxholo weYouTube ubonelelwe ziinkampani kunye nabantu abafuna ukwabelana ngeevidiyo zabo ezimfutshane, ukusuka kumfana olandelayo kwizitudiyo zemidlalo bhanyabhanya nakwizikhululo zeendaba. IHulu ibonelela ngeemovie ezininzi kunye nemidlalo yeTV yasimahla, okanye ungafumana umrhumo ohlawulelweyo ukufikelela kumxholo ongaphezulu.
Nokuba yeyiphi inkonzo iya kukunika incasa yokuba unxibelelwano lwakho luya kuyizisa njani ividiyo kwiLaptop yakho. Yiya kwiiwebhusayithi zabo, sebenzisa inqaku lokukhangela ukuze ufumane ividiyo, emva koko ucofe kabini ividiyo ukuyidlala.
Amazon.com kutshanje kongezwe umxholo wevidiyo osimahla osimahla kubulungu bayo beAmazon. Ukuba uhlawula umrhumo wonyaka weAmazon Prime ($ 79 ngokokubhala), ikunika ukuhanjiswa simahla kosuku lwesibini kuyo nayiphi na into oyithengayo kwisiza kunye nomxholo wevidiyo yasimahla. Ukuba uthenga kakhulu unyaka nonyaka kumthengisi okwi-Intanethi, oku kuyasebenza kakhulu.
ukuyeka njani ukutshaya icuba
r cima imiqolo nge na
meclizine yokugula kokuhamba
iidosi ze-motrin zabantwana
prednisolone ac 1 ukuhla kwamehlo